Mpandrindra hafainganam-pandeha (Governor), Mpandrindra hafainganam-pandeha (Governor) Shina Mpanamboatra, mpamatsy, orinasa - HNAC Technology Co., Ltd
Home>Mpanome vokatra>Fitaovam-pitaovana mekanika sy elektrika feno>governora
Mpandrindra hafainganam-pandeha (Governora)
Ny governora dia manitsy ny fanokafana ny vane mpitari-dalana mifototra amin'ny fivilian'ny hafainganam-pandehan'ny tarika mba hahatratrarana ny tanjon'ny fanovana ny vokatra sy ny fitazonana ny hafainganam-pandeha.
Ny asan'ny rafitra governora dia manitsy tsy tapaka ny herin'ny mpamokatra hydro-turbine mba hitazonana ny hafainganam-pandeha (frequency) ao anatin'ny fetra voafaritra amin'ny hafainganam-pandeha (frequency).
Ny governora dia azo ampiharina amin'ny rafi-pandaminana tokana sy indroa amin'ny karazana turbine rano 1MW-100MW rehetra, anisan'izany ny karazana Francis, karazana axial, karazana cross-flow, ary karazana impulse, sns.
Ny tena mampiavaka ny governora
1. Ho Powered amin'ny rano (AC 220V sy DC 220V amin'ny fotoana iray ihany), avo azo itokisana;
2. Raiso ny teknolojia fanaraha-maso nomerika PWM mandroso;
3. Aoka ho fitaovana amin'ny valva nomerika sy ny valva mahazatra ny indostrian'ny hydraulic amin'ny fahamendrehana avo sy ny fanoherana solika matanjaka;
4. Omena teknolojia fanaraha-maso PLC, izay mitondra fotoana tsy fahombiazana ho an'ny vondrona manontolo hatramin'ny 50000 ora na mihoatra;
5. Ampiasao ny efijery fikasihana loko ho HMI, afaka mampiseho ampy, mazava sy marina ary mora ampiasaina;
6. Manamboara fomba fiasa samihafa, ao anatin'izany ny fanaraha-maso matetika, ny fitsipika misokatra, ny fifehezana ny herinaratra ary ny fanaraha-maso amin'ny haavon'ny rano, sns.
7. Ataovy miaraka amin'ny fetran'ny fanokafana elektrika, azo itokisana sy azo ianteherana;
8. Ny singa dia azo ovaina ary mora karakaraina.